Mikasa Ny Hampandoa Lamandy Vohikala Noho Ny ‘Fampielezankevitra’ Ho An’ireo Fitaovana Ahafahana Midify i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2016 15:47 GMT
Matahotra mafy i Kremlin mikasika ireo fitaovana ahafahana midify, hany ka na ny filazàna ny fisian'ireo fotsiny aza izao lasa tsy ara-dalàna. Sary nataon'i Tetyana Lokot.
Tor. VPNs. Vohikala fitaratra. Mety horaisina ho “fampielezankevitra” ato ho ato ny filazàna ny fisian'izy ireo fotsiny, sy ireo fitaovana hafa ahafahana midify ny sivana, araka ireo fanovàna natao tamin'ny lalàna Rosiana.
Mikasa ny hampandoa lamandy noho ny “fampielezankevitra” ho an'ireo fitaovana ahafahana midify sivana amin'ny Aterineto, ny Roscomnadzor mpandrindra ny mediam-panjakana Rosiana, izay manome alalana ireo mpampiasa ho afaka miditra amin'ny pejin'ireo vohikala voabahana. Mihatra ho an'ireo vohikala “fitaratra” an'ireo vohikala voabahana ihany koa io fanovàna io.
Araka ny mpamoaka vaovao RBC, izay milaza ho manana dika mitovy amin'ilay drafitra taratasy, hampandoa lamandy amin'ny “fampielezankevitra” ho an'ireo fitaovana ahafahana midify hita amin'ny Aterineto ny Roscomnadzor, lamandy izay hitentina 3.000-5.000 robla (43-73 dolara Amerikana) ho an'ireo olon-tsotra na mpiasam-panjakana, ary lamandy 50.000-100.000 robla (730-1460 dolara Amerikana) ho an'ireo orinasa. Raha tsy dia lafo loatra ireo lamandy, mametraka lasitra mety hampidi-doza ihany ho an'ny hoavy izy ireo.
Ankoatra ny famerana ny fanomezana ny torohay ahafahana miditra amin'ireo vohikala voabahana, ilay volavolan-dalàna dia mamaritra ihany koa “ireo vohikala fitaratra” ary manome alalana ireo mpitàna ny zon'ny mpamorona hangataka any amin'ny fitsaràna ny hibahanana ny vohikala niandohana misy ilay votoaty “voajirika” sy ireo ” vohikala fitaratra rehetra azo avy aminy, izay manana anarana sy votoaty mitovy, tafiditra amin'izany ireo nadika amin'ny fiteny hafa.
Ny volana Febroary 2016, nanome sosokevitra mitovitovy amin'izany volavolan-dalàna izany ireo Rosiana mpitàna ny zon'ny mpamorona, ny hampandoavana lamandy mitentina 50.000 robla (730 dolara Amerikana) ny ISPs (mpanome tolotra aterineto) izay namoaka torohay mikasika ny fidifiana. Amin'izao fotoana izao, milaza ireo namorona ilay volavolan-dalàna fa tohanan'ny Roscomnadzor ilay volovolan-dalàna, kanefa mandà izany kosa ilay mpandrindra avy amin'ny fanjakàna.
Ratsy ho an'ny fahalalahana miteny ny fameraperana ny fitaovana ahafahana midify
Raha ny hita ety ivelany, hita ho toa mikasa ny hiarovana ireo mpitàna ny zon'ny mpamorona ary mametra ny fidirana amin'ireo votoaty amin'ny Aterineto voajirika ilay volavolan-dalàna vaovao an'ny Roscomnadzor. Fa ho lehibe lavitra kokoa ny fidiran'ny fanafoanana ireo fitaovana ahafahana midify. Nisy fotoana, efa niresaka ny famerana ny VPNs sy ireo mpanome fahafahana tsy hitonona anarana ireo tomponandraiki-panjakana Rosiana, fa kosa hatreto mbola tsy sahy nanao ho tsy ara-dalàna ireo fitaovana momba azy ireny.
Sahala amin'ireo lalàna hafa mikasika ny Aterineto any Rosia, mahita ireo fanovàna vaovao ho natao tena lasa lavitra ary mihitatra be ireo manampahaizana, mahatonga azy ireo ho azo adika ho mpanararaotra raindahiny sy ho mpanisy teritery bebe kokoa ny fahalalahana miteny.
…raha nampiharina “ara-bakiteny” ireo fanovàna amin'ny lalàna, maro ireo pejy tsy manantsiny milaza fotsiny ny hoe teknolojian'ny fidifiana no hotondroina ho mpanao “fampielezankevitra.”
Irina Levova, talen'ireo tetikasa stratejika ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny Fikarohana momba ny Aterineto, nilaza tamin'ny RBC hoe raha nampiharina “ara-bakiteny” ireo fanovàna amin'ny lalàna, maro ireo pejy tsy manan-tsiny milaza fotsiny ny hoe teknolojian'ny fidifiana no hotondroina ho mpanao “fampielezankevitra.”
Mino i Levova fa manao famoretana mivantana amin'ireo ISPs ny Roscomnadzor sy ireo Rosiana mpitàna ny zon'ny mpamorona mba ahafahan'izy ireo mandrindra mihoampampana ny fahafahana miditra amin'ny torohay ao amin'ny Aterineto. Ho azy, raha ara-teknika, afaka mibahana mihoatra ny 85% amin'ireo vohikala ao amin'ny RuNet ireo mpamatsy Aterineto ao Rosia, ary hahatonga fahafahana fibahanana adiresy IP maro tokoa ny fitomboan'ny fahafahana mamepetra, izay midika hoe mety hijaly na ireo vohikala mpanaja ny lalàna aza .
Ny ady misoko ataon'i Kremlin amin'ny tsy fitononana anarana
Hatreto, nipoaka tao amin'ny RuNet ny gidra goavana indrindra momba ny fitaovana ahafahana midify, taorian'ny nibahanana ny vohikalan'i RosKomSvoboda, fikambanana Rosiana manohana ny fahalalahan'ny Aterineto sy ny zon'olombelona.
Ny volana Febroary 2016, natao tao anatin'ny lisitra maintin'ny RuNet ny vohikalan'ny RosKomSvoboda, noho ny pejy tao amin'ilay vohikala nampianatra ireo mpampiasa azy ny fomba hidifiana ny sivana amin'ny Aterineto sy hidirana amin'ireo zavatra voabahana. Niteny ny RosKomSvoboda hoe tsy mitombina ny fibahanana sy ny fanapahankevitry ny fitsarana, satria tsy mbola noferan'ny lalàna Rosiana mihitsy ny torohay mikasika ireo fitaovana ahafahana tsy mitonona anarana, na ireo tolotra ireo.
Nanipika i Vadim Ampelonsky, ny mpitondra teny ny Roskomnadzor, fa niteraka vokany hafa ilay fanapahankevitra natao tamin'ny RosKomSvoboda, satria ilay mpampanoa lalàna nisahana ny raharaha izay “niandraikitra ny fampiharana ny lalàna manohitra ny mpanao an-tendrony dia afaka nanaporofo fa nanome fahafahana ireo mpampiasa hiditra amin'ireo fitaovan'ny mpanao an-tendrony iny torohay iny.” Niteny i Ampelonsky fa afaka milaza ny ho asan'ireo mpampanoa lalàna sy ny fitsaràna ilay didy, rehefa misy raharaha fanarahamaso ny torohay izay manampy ireo Rosiana midify ny sivana.
Tsara any anamarihana fa vao tamin'ny volana lasa teo fotsiny, ny volana Janoary 2016, nilaza tamin'ny masoivohom-baovao RBC TV i Ampelonsky fa tsy manitsakitsaka ny lalàna ny fidifiana ny sivana amin'ny Aterineto.
Tsy nobahanana intsony moa avy eo ny vohikalan'ny RosKovSvoboda taorian'ny nanovàn-dry zareo ireo votoatin'ny pejiny mikasika ny fanorotoroana ny fidifiana. Ankehitriny, tatitra nataon'izy ireo momba ny ady eny amin'ny fitsaràna sy ny taratasy ofisialin'ny Ministeran'ny Serasera no hita ao, izay manome fanazavana momba ireo fitaovana sasany ahafahana midify izay nisy nifandrohizany tamin'ilay pejy rohy teo aloha sy nohazavainy. Nanisaka torohay ihany koa ireo mpikatroka no sady nametraka rohy mankamin'ireo fitaovana sasany ahafahana tsy mitonona anarana sy tsy azo fantarina ho any aminà pejy iray misaraka amin'ny hetsika fanentanana Misokatra ataon-dry zareo ao amin'ny RuNet.
Hatreto aloha, nanamafy ny mpitondra tenin'ny Roscomnadzor, Vadim Ampelonsky, tamin'ny vaovaon'ny RBC fa miasa miaraka amin'ny vondrona iray mpitàna ny zon'ny mpamorona ao Rosia ilay mpandrindra, mba hanao vakiraoka an'ireo fanovàna ny lalàna an'i Rosia “mikasika ny torohay/fampahalalambaovao, teknolojian'ny fampahalalambaovao ary ny fiarovana ny vaovao” ary ny lalànan'ny fanitsakitsahana fehezandalàna mifehy ny Fitantanan-draharaha. Ny 17 Martsa, noresahana io volavolan-dalàna io niaraka tamin'ireo solontenan'ny Indostrian'ny Aterineto, teo an-databatra boriborin'ny Roscomnadzor mikasika ny fandrindràna ny RuNet, niaraka tamin'ireo orinasa toy ny Apple, Google, Microsoft, Yandex ary MailRu nanatrika teo. Handalo any amin'ny Ministeran'ny Serasera ilay volovolan-dalàna, ny 21 Martsa, mialoha ny handehan'io any amin'ny Duma Rosiana hanaovana latsabato.